प्रेरक प्रसंग : ‘तँ आँट म पुर्याउँछु’ — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : ‘तँ आँट म पुर्याउँछु’
काठमाडौं – मलाई कुनै बेला लाग्थ्यो, कसले भनेको होला । अब म बुझ्न थालेको छु । हाम्रो मस्तिष्कले हरबखत भन्छ, ‘तँ आँट म पुर्याउँछु ।’ वास्तवमा हामी आँट गर्न सक्तैनौँ । त्यसैले केही पाउँदैनौँ । आँट अर्थात् सपना देख्ने साहस नभएकाले हामीले नपाएका हौँ ।
हामीलाई हाम्रो मस्तिष्कको शक्ति र सामाथ्र्यबारे केही ज्ञान छैन्, त्यसैले हामी ठूलोकुरा भन्दै कामबाट पन्छिन्छौँ । हाम्रो मस्तिष्क सर्वशक्तिमान छ । यो पारसमणि हो र यसले पत्थरलाई सुनमा परिणत गर्न सक्छ ।
तपाईँको मनमा कामको सफलताप्रति विश्वास हुनु आवश्यक छ । कुनै कामप्रति तपाईँको मनमा जब ‘म सक्छु’ भन्ने विचार बन्छ तब तपाईँको मस्तिष्कले त्यसलाई गर्न, सफल पार्न हजारौँ तरिका खोजेर ल्याउँछ । तर यस विपरीत तपाईको मनमा ‘म सक्तिनँ कि’ भन्ने धारण बन्छ भने तपाईँको मस्तिष्कमा केही विचार आउँछन्, ‘मैले यस्तो काम पहिले कहिल्यौ गरेकै छैन् । मैले कसैले यस्तो गरेको देखेको पनि छैन । यो काम सम्पन्न गर्न मसँग साधन कहाँबाट आउँछ ? म यस कामका लागि योग्य भएकै छैन् । मैले यो भन्दा अघि धेरै तयारी गर्नुपर्छ आदि ।’
यस प्रकार तपाईँको. दिमाग कुनै न कुनै प्रकारले काममा बाधा उत्पन्न गर्छ र तपाई त्यसमा सफल हुन पाउनु हुन्न । जस्तो, तपाई मोटो हुनुहुन्छ । निकै मोटो । ८० केजीभन्दा पनि निकै बढी । तपाईलाई आफ्नो तौल घटाउनु छ । ६० केजी या त्यो भन्दा पनि कमको बन्नुछ । तर तपाईलाई विश्वासनै छैन्, म आफ्नो तौल घटाउन सक्छु । कसैले तौल घटाएको कुरा तपाईलाई केबल बनावटी कथा जस्तो लाग्छ । तब तपाईकाृे जिउ मात्र अल्छी बन्दैनन्, आफ्नो दिमाग पनि वहाना बनाउन थाल्छ । खानेकुरा देख्नसाथ तपाईको मन राकिदैन मान्दैन, आज एक दिन खाएर कति नै पेट बढ्ला र । एक दिनले के फरक पर्छ, भोलीदेखि बार्छु । भोलीदेखि खाना कम खान्छु । जब बिहान वाकमा जाने बेला हुन्छ, तब झ्यालको पर्दा खोलेर यसो बाहिर चिहाउनुहुन्छ, धत् आज कुहिरो लागेको छ, चिसो पनि उतिकै छ, भोलीदेखि जान्छु ।
आङतान्दै घडी हेरेर सोच्नुह्ुन्छ आज त ६ बजिसकेछ, त्यो मुर्दार वाकवाट फर्कीरहेको हुन्छ, मलाई त्यसको अनुहारै मनपदैन् । भोलीदेखि जान्छु । र, त्यो भोली कहिल्यै आउँदैन । तपाईको दिमागले त्यो वाकमा नजाने हजार वहाना खोजेर तपाईका अगाडि तेस्र्याउँछ । र, जस्ले भोली भन्छ, उसले काम कहिलै र्गदैन ।
भोलीवादी बनेर जुन कामलाई तपाई पन्छाइरहनुभएको छ, त्यसको मूल कारण हो, तपाईलाई त्यो काम हुन्छ या गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन् । जबसम्म मानिसलाई कुनै काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास हुँदैन, तबसम्म ऊ आलटाल गरिरहन्छ । तपाईको मनमा ‘म यो गर्न सक्तिँन किँ’ भन्ने धारणा छ भने तपाईको दिमागले कस्ता कस्ता विचार र बाहाना बनाउन थाल्छ भने सुन्ने पनि चकित हुन्छ । तर जब त्यसका विपरीत तपाई आफ्नो पेट घटेर स्लिम बनेको कल्पना गर्न थाल्नुहुन्छ, आफूमा विश्वास भर्नुहुन्छ तब तपाईलाई बिहान उठ्नका लागि घडिमा अलार्म लगाइरहनै पर्दैन । अलार्म बज्नुभन्दा अगि नै तपाईका आँखा खुलिसकेको हुनेछ । तपाईँ दौडेर आएर सनराइज हेर्दै कफी खान मनपराउन थाल्नुहुन्छ । तपाई बिहानका दृश्यहरु मनपराउन थाल्नु हुन्छ । अर्थात तपाईको विश्वससँगै तपाईको दिमाग पनि त्यो विश्वासलाई साकार बनाउने योजना बुन्न लाग्छ । त्यस कारण सफलताका लागि आवश्यक छ– दरिलो विश्वास ।
२०७७ मंसीर ५ गते प्रकाशित
कस्तो बानी भएका मानिसहरु सफल हुन्छन ?
जब तपाईँ दुःख बाँढ्नुहुन्छ यो कम हुन्छ, यदि सुख बाँढ्नुहुन्छ भने यो अझै बढ्छ
प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रपतिलाई, अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक